ठूला केटाहरूले पनि उपयोगिता बिर्सन्छन्! | Martech Zone
ठूला केटाहरूले पनि उपयोगिता बिर्सन्छन्!
मङ्गलबार, अप्रिल 17, 2007 Douglas Karr
मँ केही निराशाजनक प्रयोज्य मुद्दाहरूमा मैले एउटा अनुप्रयोगको साथ नोटिस गरेको एक छोटो नोट लेख्न चाहान्छु।
अनुसार विकिपीडिया, मानव कम्प्युटर अन्तर्क्रिया र कम्प्युटर विज्ञानमा, उपयोगिता सामान्यतया लालित्य र स्पष्टता को साथ दर्साउँछ जुन कम्प्युटर प्रोग्राम वा वेब साइटको साथ अन्तर्क्रियाको साथ डिजाइन गरिएको हो।
मैले प्रदान गर्ने पहिलो एउटा वास्तविकतामा उपयोगिताको मुद्दा हो गुगल गृह पृष्ठ। यदि तपाईंले गुगल होम पेजमा गुगल रिडर कम्पोनेन्ट थप्नुभयो भने, यो एकदम राम्रोसँग काम गर्दछ। त्यहाँ छ; जे होस्, एउटा स्पष्ट मुद्दा: 'मार्क सबै पढिएको छ' लिंक खोल्नको लागि लिंकको तल सीधा अवस्थित छ Google Reader.
एक मुट्ठी समय अहिले, मैले गलत लिंक क्लिक गरेको छु र मेरा सबै फिडहरू स्वचालित रूपमा तिनीहरू पढिएको स्थितिमा गए। यो डरलाग्दो उपयोगिता हो। म Google लाई यो लिंक कुनै अन्य लिंकबाट टाढा सार्न प्रोत्साहित गर्दछु।
दोस्रो उदाहरण हो माइक्रोसफ्ट एन्टुरेजजहाँ ईमेलको लागि मेट्नुहोस् बटन जंक ईमेल बटनको पछाडि हुन्छ। माइक्रोसफ्ट एन्टुरेज OSX को लागी आउटलुक जस्तै हो, तर यसमा बटनहरू वरिपरि सार्न कुनै विकल्प छैन। नतिजाको रूपमा, मैले गल्तीले मेरो जंक ईमेल फोल्डरमा वैध ईमेलहरू थपेको छ। यसलाई अन्डू गर्न मैले कुनै जंक ईमेल नियम अनडू गर्नुपर्नेछ, मेरो जंक ईमेल फोल्डरमा ईमेल फेला पार्नुहोस्, र फेरी मेरो इनबक्समा सार्नुहोस्। अरे!
म ती केटाहरू मध्ये एक हुँ जो एक अनुप्रयोग भित्र सबै चीजको व्यवस्थित र कम्पार्टलाइज गर्न मनपराउँछ। मलाई विश्वास छ यी दुबै उदाहरणहरू हुन् जहाँ आयोजन कम्पोनेन्ट्सले तार्किक अर्थ राख्यो - तर प्रक्रियागत रूपमा होइन। यो बुझ्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ कि कसरी प्रयोगकर्ताहरूले वास्तवमा तपाईंको अनुप्रयोग प्रयोग गरिरहेको छ ताकि तपाईं कमजोर घटक लेआउट मार्फत अनजाने गल्तीहरू रोक्न सक्नुहुन्छ।
यसलाई वर्डप्रेसमा कन्ट्रास्ट गर्नुहोस्, जसले सँगै सम्बन्धित नभएको कम्पोनेन्टहरूलाई अलग गर्ने शानदार काम गर्दछ। नोट गर्नुहोस् बचत गर्नुहोस् र सम्पादन जारी राख्नुहोस् र बचत शीर्षमा बटनहरू (जुन पोष्ट फारमको आधार हो) र यस पोष्ट हटाउनुहोस् बायाँपट्टी एकदम तलको बटन ... टाढा, एक अर्काबाट टाढा।
राम्रो काम, WordPress!
के तपाईंसँग अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्नेसँग भय terrible्कर उपयोगिता मुद्दाहरूको उदाहरणहरू छन्?
तपाईको गुगल रिडर फिड टेक्नोराटी मनपर्नेमा आयात गर्नुहोस्
कुनै राम्रो जन्मदिनको उपस्थिति छैन! Feed०० फिड रिडरहरू!
अप्रिल 18, 2007 मा 12: 37 एएम
थोरै ज्ञात तथ्य: म कारण हटाउने बटन रातो रातो हुन्छ।
किनकि मलाई मेटाउने र सेभ between को बीचको भिन्नता कसरी पढ्ने थाहा छैन
अप्रिल 18, 2007 मा 3: 14 PM
वा ती colorblind मान्छे को लागी गाढा खैरो। 😉
अप्रिल 18, 2007 मा 9: 52 एएम
वास्तवमा, यदि तपाइँ आईई7को साथ वर्डप्रेस 'नि: शुल्क होस्टिंग सेवा प्रयोग गर्नुहुन्छ र तपाईं "वैकल्पिक अंश" सेक्सन विस्तार गर्न प्रयास गर्नुहुन्छ भने, यो पूर्ण रूपमा विस्तार हुँदैन। यो एक उपयोगिता समस्या भन्दा बढी ग्लिच हुन सक्छ, तर कहिले पनि कम, यो कष्टप्रद हुन सक्छ।
अप्रिल 18, 2007 मा 10: 57 एएम
माइस्पेसमा केहि पनि।
Wes, कि एक मलाई खोकी बनायो र ठूलो हाँस्न। तपाईं बिल्कुल सही हुनुहुन्छ!